साताको तस्वीर : छियाछिया निसी ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : छियाछिया निसी !
२०७४ आश्विन ११, बुधबार १७:५३	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
यस पटकको वर्षातले बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो गएर जनधनको ठुलो क्षती पु-यायो । पहिरोले घर भत्किदा एकै परिवारका चार जना समेत पाँच जनाको ज्यानै गयो भने सयौ परिवार पहिरोका कारण गाउँनै छोडेर माथी लेक धुरीमा विस्थापित जीवन विताउन वाध्य भए । बालबालिकाहरु पढ्नबाट वन्चित त भएनै सयौँ परिवार घरबार चट्ट छोडेर बन्दोबस्तीका सामानहरु बोकेर लेकतिर लागे ।
सरकारबाट प्राप्त सहयोग हात्तीको मुखमा जीरा सरह भएको पीडितहरुको गुनासो छ । पहिरो पीडितहरुलाई राहत हस्तान्तरण गरेर दु:ख र पीडामा मल्हम लगाउने काम सामाजिक संघसंस्थाहरुले गरिरहेका छन् । निसीखोला गाउपालिकाका पहिरो पीडितहरुको मुहारमा अझै हँसी आउन सकेको छैन । यस वर्षको पहिरोले छियाछिया पारेको निसीको छाती निको हुन र निसेलहरुमा देखिएको पहिरोको सन्त्रास मेटिन अझै केहि समय लाग्ने निश्चित छ ।
गत २०७४ साल साउन १९ गते राति परेको अविरल बर्षाका कारण साउन २० गते विहान ७ बजेको समयमा पहिरो निसीखोला गाउँपालिका वडा नं २ बाहुनगाउँमा घरमाथीबाट पहिरो खसेर घर पुर्दा घरमा सुतीरहेका ६८ वर्षिय मनिराम छन्त्याल, ६३ वर्षकी नन्दकली छन्त्याल, २२ वर्षिया बुहारी बिन्दु छन्त्याल र १८ वर्षकी छोरी गीता छन्त्यालको ज्यान गएको थियो भने निसीखोला गाउपालिका-१ साविक देविस्थान गाविसको हुल्दीमा पहिरोले लाल बहादुर सिँजालीको घर बगाउँदा उनकी ७६ वर्षिया आमा खगिशरा सिँजाली मगरको मृत्यु भएको थियो ।
हुल्दीको पहिरोको सन्त्रासबाट हुल्दी गाउँनै विस्थापति बनेको थियो । गाउँवासीहरु पहिरोबाट बच्न घरका गाईबस्तु बालबच्चा बन्दोवस्तका सामान लिएर माथी जगलको धुरीमा कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएका थिए । उनिहरुका परिवारमा पहिरोको सन्त्रास अझै कायम छ । उनिहरुको मुहार उज्यालो भएको छैन ।
साउन ३२ गते राति खाडुगाउँ देखि माथि रहेको बाहुनगाउँ काँडाबाट झरेको पहिरो निसीखोला गाउपालिका- २ को खाडु गाँउमा पसेपछि त्यहाँ रहेका घरहरुमा बसोवास गर्नेहरु भागाभाग भएका थिए । पहिरो घरभित्र पसेर ढोका लगाउन उघार्न नमिल्ने अवस्था अहिले सम्म रहेको छ ।
पहिरो झर्दाको कहालीलाग्दो क्षणको स्मरणमात्रले मुख मलीन बनाउने पीडितहरु अहिले सामान्य अवस्था तिर फर्किदै छन् ।
यसैवीच, इबागलुङका फोटो संपादक किरण आचार्य एक हप्ता पहिले त्यस क्षेत्रमा पुगेर खिचेका चलचित्र र तस्वीरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
२०७४ असोज ११ ।
नवलपरासीको अमरौटामा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगीता सुरु
गल्कोटका ग्रामिण मोटरबाटो मर्मत कार्य अन्तीम चरणमा, वडा नं ६ मा मर्मत सूरु !